Reerkee ayaa loo dhiibi rabaa Raysal Wasaaraha (Bal xogtan ka bogo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Reerkee ayaa loo dhiibi rabaa Raysal Wasaaraha (Bal xogtan ka bogo)
Reerkee ayaa loo dhiibi rabaa Raysal Wasaaraha (Bal xogtan ka bogo)
(Hadalsame) 02 Agoosto 2020 – War hurdada ka kaca qabyaalad (ureysa) meesha halla yuururina! 50 sano ka hor adduunku siduu ahaa maanta ma aha. 50 sano ka dibna ma noqon doono.
Maanta waa adduun internet, digital, macluumaad qul qulaya, ganacsi iyo albaabo furan, waa maskax iyo wax barasho, hal abuur iyo hogaamin, hawlkarnimo iyo han sare. Dad baa galbaday oo taariikhda ka baxay, dad cusubna ciyaarta ayey ku soo biirayaan maalin walba.
Dakhliga muwaadinka, horumarkiisa, wax barashadiisa, caafimaadkiisa, ganacsigiisa, maanta dalalka Denmarka, Ireland, New zealand, Singapore, Taiwan, Netherland, oo (dalal yar yar ah) wuxuu ka horreeyaa (dalal waaweyn) sida Ingiriis, Faransiis, Maraykan, China, Russia, iwm.
Denmark waa 0.1% tirada dadka adduunka, haddana shirkadeeda MAERSK wexey maamushaa 25% ganacsiga maraakiibta adduunka, 343 dekedood, 120 dal.
Ilmaha amiirrada iyo wasiirrda Denmark, Netherland, Finland, Singapore, wexey dhigtaan iskuulada caadiga ah ee dadka kale, wexey raacaan basaska iyo gaadiidka muwaadiniintu raacaan.
Shirkadaha “Givaudan” iyo “Firmenich” ee Switzerland wexey soo saaraan 34% adduunka “geedaha” iyo “carafta” (Flavour & Faragrance) wax walba lagu daro, oo gurigaaga iyo jikadaada yaal, cunto ilaa barafuun.
Netherlands (Holland) waa dalka 4-aad adduunka ugu wax dhoofin badan (2019) tiro dad ahaanna waa dalka 69-aad.
Maxaa ugu wacan inay dalal waaweyn dhaafaan?
1) Caddaalad iyo fursad siman 2) Ganacsi furan 3) Ciribtir musuq maasuq 4) Tacliin iyo tababar 5) Ilaalin sharci 6) Qiyamka shaqo: hawlkarnimo, hufnaan, xisaabtan, daacadnimo, hogaamin.
Buugan (Too small to Fail) wuxuu falanqaynayaa sida ay dalal yar yari adduunka khariidadiisa dib ugu habaynayaan.
Waxaa Qoray: Sheekh Maxamed Idriis
Previous articlePakistan oo taangiyo is wada geeysey xadka ay Hindiya la wadaagto (Hindiya oo walaac ka muujisay & awoodda tawaangidan)
Next article”Kaddib Somalia & Qadar waxaan saldhig ka samaysanaynaa Cumaan” – Arrintan oo jug istaraatijiyadeed ku ah Imaaraadka marka la eego halka uu ku yaallo jasiirad-u-ekaha Musandam